WỤNYE WINDOWS 10 NJIKỌ NJIKỌ NA NJIKWA NJIKỌ NGWá ỌRỤ - WINDOWS - 2019
Wụnye Windows 10 Njikọ Njikọ na Njikwa Njikọ Ngwá Ọrụ
Njikọ faịlụ ezighi ezi na Windows 10 nwere ike ịbụ nsogbu, karịsịa ma a bịa na ụdị faịlụ dịka .exe, .lnk na ihe ndị yiri ya. Njehie nke mkpakọrịta nke faịlụ ndị a nwere ike iduga, dịka ọmụmaatụ, enweghị eziokwu na enweghị mmeghe na mmemme ọ bụla (ma ọ bụ mepee na ụfọdụ mmemme ndị na-enweghị ọrụ), ọ dịghị adịrị mfe maka onye ọrụ novice iji dozie ya (Maka ozi ndị ọzọ gbasara ntụziaka ntuziaka: Njikwa Njikọ Windows 10 - ihe ọ bụ na otu esi edozi ya).
Na nchịkọta nkenke a nke Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Njikwa Ntugharị efu dị mfe, ọ na-enye gị ohere ịgbanweta mmekọrịta nke ụfọdụ ụdị faịlụ dị mkpa na Windows 10 na-akpaghị aka. Nakwa uru: Windows Error Correction Software.
Jiri Njikwa Nchịkọta Njikọ Ngwá Ọrụ iji weghachite faịlụ mkpakọrịta
Nke a na-enye gị ohere iweghachi njikọ nke ụdị faịlụ ndị a: BAT, CAB, CMD, COM, EXE, IMG, INF, INI, ISO, LNK, MSC, MSI, MSP, MSU, REG, SCR, THEME, TXT, VBS, VHD, ZIP na imezi oghere nke nchekwa na diski na onye nyocha (ma ọ bụrụ na nsogbu kpatara mkpakọrịta ọjọọ).
Banyere iji Ngwá Ọrụ Njikwa Njikwa, n'agbanyeghị enweghị asụsụ asụsụ Russian, enweghi nsogbu ọ bụla.
Gbaa usoro ihe omume (ma ọ bụrụ na ịberede, ị gaghị agba ọsọ faịlụ .exe - ihe ngwọta ọzọ). Na njikwa akaụntụ njikwa nyeere, kwadoro igba egbe.
Pịa ụdị faịlụ nke mkpakọrịta ịchọrọ idozi.
Ị ga-enweta ozi na edozi nsogbu ahụ (data ziri ezi nke ndị mmekọ ga-abanye na ndekọ Windows 10).
N'ọnọdụ mgbe ị chọrọ idozi faịlụ faịlụ .exe (na usoro ihe omume ahụ bụkwa faịlụ .exe), gbanwee ndọtị nke Njikwa Njikwa Gbanwee faịlụ na-arụ ọrụ site na .exe ka .com (lee Otu esi gbanwee ndọtị faịlụ na Windows).
Nbudata Ngwá Ọrụ Njikwa Njikwa File n'efu site na saịtị http://www.majorgeeks.com/files/details/file_association_fix_tool.html (kpachara anya, nbudata na-eme site na njikọ ndị e gosiri na nseta ihuenyo n'okpuru)
Usoro ihe omume ahụ anaghị achọ ntinye na komputa - naanị kpochapụ ihe nchekwa ahụ ma mee ka ọrụ ahụ rụọ ọrụ.
Naanị, m na-echetara gị: lelee ihe ndị a na-ebudata ngwa ngwa na virustotal.com tupu ịmalite. N'oge ahụ ọ dị ọcha, ma ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-adịgide karịa oge.